Dalxiisyaasha ayaa ku xannibmay Wadada Sababta barafka awgeed RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir14 BoluSaaxiibadayaasha ayaa ku xayiran waddada oo ay sabab u tahay Barafka
27 / 01 / 2014 14 Bolu, GUUD, TELPHER
Fasaxlayaashu waxay ku xayiran yihiin waddada barafka awgiis: Fasaxlayaasha u imanaya Kartalkaya ka dib biloowga nus-nasashada xilliga nasashada, ayaa ku xayiran wadada sababtoo ah baraf culus iyo baraf. Barafkii ka da’ay Kartalkaya wuxuu gaadhay 65 sintimitir sababtuna tahay baraf dartiis ilaa xalay fiidkii. Fasaxlayaashu wadada ku sii jiraan, baraf iyo barafka sababta silsiladaha gawaarida awgeed, qaar baa ku noqon lahaa. Hoteellada ku yaal garoon barafku waxay gaareen deganaanshaha 95. Fasaxa Kartalkaya'ya ee Ankara ee Ibrahim Bar, weriyaha AA ayaa sheegay, in kasta oo taayirka jiilaalka gaariga uu sabab u yahay taktirdığını barafka culus. Barı wuxuu sharraxay inuu doorbiday Kartalkaya sababta oo ah u dhawaanshaha caasimada wuxuuna yiri, “Xarunta Kartalkaya Ski Center waa goob qof walba doorbido. Waxaan halkaan u nimid kadib markii aan baranay barafka. Barafka ayaa xoogaa dabayaaqadii sannadkan. Waxaan ku faraxnay barafka inta lagu gudajiray xilliga simistarka ”.
Xilliyaadka fasaxyada ku jira waddada waxay noqdeen hab nololeed dadka tuulada ah
Dalxiisayaashu waxay ku raaxaysteen barafka buuraha Ilgaz
Baraf aad u culus
RayHaber 27.01.2014 Warbixinta Shirka
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni normalleşmeyle birlikte yeniden açılan Konyaaltı Sahili ve Lara TRT Kampı’na toplum ulaşımda yaz seferlerini başlattı. 104 nolu hat Gürsu’dan Konyaaltı Sahili [More ...]